Ungaphumelela Kanjani Umkhiqizo Wakho Ngokumaketha Kwevini | Martech Zone
Sabelane nge-infographic ku- ukuvuka komvini futhi ngathola isimanga isifundo secala ku-Vine Marketing kusuka kuBrian Gavin Diamonds, kepha kuthiwani ngeyakho Isu Lokumaketha Umvini?
IVine, ipulatifomu enamavidiyo wemizuzwana engu-6 edlala ngokuzungezile, ithole ukunakwa kwabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-40. Bangaphezu kwezigidi eziyi-100 abantu ababuka imivini inyanga ngayinye. Lokho kwenza ipulatifomu ibe yindawo evundile yecebo lokukhangisa elihlakaniphile ukukhulisa ukuvezwa komkhiqizo wakho. Ngoba ipulatifomu isha sha, futhi ifomethi ihlukile, u-SurePayroll ucabange ukuthi kungasiza ukuhlola kahle ukuthi ungawusebenzisa kanjani lo Vine ukusiza ibhizinisi lakho.
Ngokuya nge-SurePayroll, isu lakho lokumaketha iVini kufanele libe nokuhlela kuqala - ukucabanga ngezithameli zakho, okubonwayo nemisindo, nokwakha ibhodi lezindaba lamaphaneli ayisithupha. Qinisekisa ukuthi ividiyo yeVine izohlinzeka ngenhloso, ezinye izibonelo yilezi:
Dala ividiyo yeVine esiza abantu ukuxazulula inkinga.
Dala ividiyo yeVine ekhombisa i-athikili entsha noma i-ebook.
Dala ividiyo yeVine ekhombisa i- "How To".
Dala ividiyo yeVine egubha umcimbi noma iholide.
Dala ividiyo yeVine eyabelana ngezindaba ezihamba phambili.
Dala ividiyo yeVine ekhombisa abalandeli bakho abakhulu.
Dala ividiyo yeVine eyabelana ngesaphulelo, isigqebhezana noma i-freebie.
Dala ividiyo yeVine ebonga amakhasimende akho.
Dala uchungechunge lwevidiyo yeVine ukugcina izibukeli zibuya.
Dala ividiyo yeVine ngenani eliphakeme lesiko lenkampani yakho.
Futhi faka njalo i-logo yakho, amazwibela ahlakaniphile, isixhumanisi esiya kuwebhusayithi yakho, a i-hashtag ecwaningwe kahle, kanye neCall-to-Action!
Tags: isiqinisekiso sokuqinisekisaNgifikileama-hashtag omviniimibono yomviniizihibe zomviniukumaketha umviniamasu omviniisu lomviniamavini omvini
Sikufisela umhla ka-4 Julayi omuhle! Kungakhokha ukuthi ube yiPatriotic kumaSocial Media
Amaphutha Wokumaketha Komphakathi Ofanele Uwagweme